कोरिया बाट फर्केर बंगुर पालन थालेका युवा देशमै महिनाको दुइ लाख बढी कमाउन थालेका छन्! | PaniPhoto
कोरिया बाट फर्केर बंगुर पालन थालेका युवा देशमै महिनाको दुइ लाख बढी कमाउन थालेका छन्!
Admin01 / February 12, 2018 / 1 Comment
कोरियाबाट फर्केर बंगुर पालन थालेका झापा दमकका लेखनाथ घिमिरे अहिले महिनाको दुइ लाख भन्दा बढी कमाउन थालेका छन्!
कोरियाबाट सिकेको सीपले आफ्नै देशमा नै केहि गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका उनले दुइ हजार सतरी सालमा कोरियाबाट फर्केर, त्यहाँ कमाएको केहि पैसा लगानी गरि बंगुर पालन थालेका हुन्!
“ब्राह्मणको छोरो भएर बंगुर पाल्छु भन्दा सुरुमा घर तथा समाजबाट केहि नकारात्मक टिप्पणी पाएपनि अहिले भने मेरो कमाइ देखेर सबैको सोच बदलिएको छ!” उनले सुनाए!
गाउँमा नै उनको अलिकती जग्गा त्यसै खालि बसेको थियो! खोलाको छेउमा भएकाले खासै खेति हुँदैन थियो त्यहाँ! त्यहि जग्गामा उनले बाँसका केहि खोर बनाएर बंगुर पालन कार्य थालेका थिए!
केहि समय पछी उनले यो ब्यबसायबाट राम्रो कमाइ हुनेरहेछ भन्ने बुझेपछि अरु थप लगानी बढाई त्यो बंगुर फारामलाई ब्यबसाहिक रुप दिएका थिए!
“घर नै बैंकमा राखेर पैसा निकाली बंगुर फारममा लगानी गर्छु भन्दा सुरुमा बा मान्नु भएको थिएन! तर मैले बालाई मेरो कोरियाको अनुभव अनि केहि गर्न सक्छु भन्ने साहस प्रस्ट बुझाएपछी उहाँले सहमति दिनुभएको थियो!”
“यति ठुलो लगानी गर्न केहि डर लागेपनि मलाइ आफुमा बिश्वास भने थियो, त्यहि बिश्वास र हिम्मतको प्रतिफल हो यो सबै!” उनले मुस्कुराउंदै सुनाए!
सुरुको एक बर्ष काम मन्द गतिमा भएपनि अहिले भने उनी आफ्नो ब्यवसाय अझै बढाउने सुरुमा लागेका छन् ।
“दुईवटा माउबाट काम थालेको हो, अहिले एक सय ८० भन्दा बढी माउ छन्, पाँच सय भन्दा बढी माउ पुर्याउने लक्ष्य हो, त्यति गर्न सकियो भने माग पुरा गर्न सकिन्छ होला” घिमिरे भन्छन्!
अहिले ठूला ठूला आठवटा खोर छन् । दैनिक तीन/चारवटा बंगुर, थप चारवटा खोर बनाएर दुई हजार भन्दा बढी बंगुर पाल्ने योजना उनीसंग छ । त्यसका लागि खोर बनाउने काम सुरु भइसकेको छ ।
अहिले दिनमा दुई/तीनवटा भन्दा बढी बंगुर बजार पठाउन सकिंदैन, दिनमा १० वटा भन्दा बढी बंगुर बजार पठाउन सकेको खण्डमा आम्दानी राम्रो हुने उनले बताए ।
अहिले सबै खर्च कटाएर मासिक सरदर दुइ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । अहिले बंगुर फार्ममा उनीले डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् ।
घिमीरेले भने, ठूलो लगानी हामीले गरिसकेको छु, अब बंगुरको संख्या थपे पनि लगानी त्यति धेरै थप्नु पर्दैन्, राम्रै कमाइ हुने आशामा छु।
कोरियाको प्रविधिको प्रयोग गर्दै उनले आधुनिक खोरमा योर्कसायर, लेनरेस, ड्युरोक र ह्यामसायर गरी चार जातका बंगुर पालेका छन् ।
बंगुरको स्वास्थ्यमा पनि उनी बढी नै सचेत छन् । जन्मेलगत्तै आइरन, ४० दिनमा जुकाको औषधि, दुई महिनापछि स्वाइनफ्लुको औषधि, त्यपछि खोरेतको सुइ र टेपवर्मको औषधि दिए बंगुर पूर्ण रुपमा रोगमुक्त हुन्छ । बजारमा बंगुरको मासु स्वस्थकर हुन्न भन्ने हल्ला बढी चलेको हुन्छ, हामी यसमा सचेत भएकाले हाम्रो उत्पादनमा कुनै शंका गर्नु पर्ने ठाउँ छैन, उनले भने ।
घरायसी रुपमा फ्याकिएको खाना खुवाएर पालिएका बंगुर र यसरी अत्याधुनिक तरिकाले पालिएका बंगुरबीच तुलना हुनै सक्दैन, घिमिरेले भने ।
काटेको मासु प्रतिकिलो तीन सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ ।
मासु बिक्रीको लागि ऊनले दमकमा नै अत्याधुनिक वधशाला संचालन गर्ने सोच लिएका छन्। त्यहाँ माशु टुक्रा पार्नका लागि स्लाइस मेसिनको प्रयोग गरिनेछ । आवश्यकता अनुसारका टुक्रा पार्न, हड्डी र मासु छुट्याउनका लागि कोरियाबाटै झिकाएर मेशिन राख्ने सोच छ उनको!
ठूलो ज्यानको बंगुर मार्न नेपालमा निकै पुरानो प्रविधि प्रचलनमा छ । घनले टाउकोमा हान्ने वा भालाले पेटमा रोपेर मार्ने । यसो गर्दा मासुको गुणस्तरमा कमी त आउँछ । त्यति मात्र नभएर बंगुरलाई निकै सास्ती पनि हुन्छ । आफू मर्नु अघि त्रासमा भएको पशुको मासु पनि गुणस्तरको हुँदैन
अनि पशु अधिकारको पनि कुरा आउँछ । घिमिरेले भने अब आफ्नै फारमभित्र स्लटर हाउस बनाउँदैछौं। जसमा मेसिनले नै बंगुरको बध गर्नेछ । रगत बगेर सकिएपछि शरिरको सरसफाई मेसिनकै सहारमा हुनेछ । यसका लागि चिनिया मेसिनको लागि अर्डर पनि भइसकेको छ । स्लटर हाउस बनेपछि प्लाष्टिक प्याकिङ र ससेज बनाउने तयारीमा समेत उनी छन् ।
अहिले उनको फारममा छ जनाले पूर्ण रोजगारी पाएका छन् भने आंशिक अनि अप्रत्यक्ष रुपमा काम गर्नेहरु पनि धेरै छन्!
“यसरि केहि जनालाई मात्र भएपनि रोजगार दिन सक्दा बडो गर्व लाग्दो रहेछ” उनि मुस्कुराए!
अबको केहि बर्षमा नै यसलाई बढाएर पाँच सय बढी माउ बनाउने अनि महिनाको पाँच लाख सम्म आम्दानि गर्ने उनको लक्ष छ!
“हिम्मत र सिप चाहिन्छ! आफ्नै देशमा लगानी गरि राम्रो आम्दानि गर्न सकिन्छ!” अन्त्यमा उनले भने!
Tags: pig / Posted in: खोज-खाज
Dik shrestha says:
February 12, 2018 at 4:59 pm / Reply
Good nob i’m also want to do …..
After Arrived the nepal. (South korea)
© 5386 PaniPhoto. All rights reserved.